eSancharpati | दूध खुवाउँदा ३ महिनाकी छोरीको मृत्यु ! हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ - eSancharpati दूध खुवाउँदा ३ महिनाकी छोरीको मृत्यु ! हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ - eSancharpati
दूध खुवाउँदा ३ महिनाकी छोरीको मृत्यु ! हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ
ईसञ्चारपाटी २०७७ पुष १, बुधबार
एजेन्सी । आमाले खुवाउँदा ३ महिनाकी बालिकाको मृत्यु भएपछि हत्याको अभियोगमा आमा पक्राउ परेकी छिन् ।
बालिकाको मृत्यु मेथाम्फेटामाइनको ओभरडोजका कारण भएको पाइएपछि आमालाई पक्राउ गरिएको हो ।
अटम ब्लान्सेट नामकी ३१ वर्षकी ती महिलाले आफूले मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स र गाँजा सेवन गरेर छोरीलाई दूध खुवाएको स्वीकार गरेकी छिन् । बालिकाको अटोप्सी रिपोर्टमा उनको शरीरमा उच्च मात्रामा मेथाम्फेटामाइन पाइएको थियो ।
द सनको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाको लुसियाना राज्यको मारेरोमा ती बालिका हलचल नगरेको जानकारी पाएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु घरमै पुगेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीले घटनास्थलमै उनलाई मृत घोषित गरेका थिए तर मृत्युको कारण थाहा हुन सकेको थिएन ।
अटोप्सी रिपोर्टमा बालिकाको शरीरमा ड्रग्सको मात्रा पाइएको थियो । ११ डिसेम्बरमा ती बालिकाको मृत्यु हत्या भएको ठहर गरिएको थियो । पछि सोधपुछका क्रममा ब्लान्सेटले आफूले मेथ र गाँजा सेवन गरेर छोरीलाई दूध खुवाएको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
अधिकारीहरुले ब्लान्सेटको घरमा दुवै लागूऔषध पनि बरामद गरेका छन् । महिलालाई सेृकेण्ड डिग्री हत्याको अभियोग लगाइएको छ । उनलाई अदालत कहिले उपस्थित गराइनेछ भन्ने प्रस्ट छैन ।
ड्रग्सका कारण कुनै बच्चाको मृत्यु भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि इण्डियानामा पनि एक महिलाले मेथ सेवन गरेर छोरालाई दूध खुवाएपछि २ महिनाका छोराको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।
देशमा अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” : प्रधानमन्त्री ओली
दुई शर्तमा पार्टी एकता हुन सक्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
केपी ओलीको पार्टी धुलो छाप पार्टी हो: माधवकुमार नेपाल
नेकपा विभाजनले मान्यता नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय
जनयुद्ध र जनआन्दोलन का पूर्वलडाकुलाई लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय